စံမမီတဲ့ စပါး ၊ အတွဲမိတဲ့ ကာဗာ-ဒို ၊ ကံကောင်းတဲ့ အိုလေး တို့နဲ့ . . . စပါး ဝ-၃ မန်ယူနိုက်တက် ပွဲက ပြောစရာ အချက် ၄ ချက် - xyznews.co
စံမမီတဲ့ စပါး ၊ အတွဲမိတဲ့ ကာဗာ-ဒို ၊ ကံကောင်းတဲ့ အိုလေး တို့နဲ့ . . . စပါး ဝ-၃ မန်ယူနိုက်တက် ပွဲက ပြောစရာ အချက် ၄ ချက်
အိုလေဂန်နာ ဆိုးရှား ကတော့ အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား စတိုင် ပီသနေဆဲပါပဲ ။ ဖိအားတွေ အောက်ရောက်လာပြီး ထုတ်ခံ ရတော့မယ်လို့ အသံတွေ ကျယ်လောင်ပြီးတိုင်းမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ နိုင်ပွဲ ပြန်ယူကာ ဆိုးရှား ကို ထပ်မံ ကယ်တင် ခဲ့ပြန် ပါပြီ ။
ဖိအားဝင်နေတဲ့ နည်းပြချင်း အတူတူ ကို နူနို ဆန်းတိုစ့် က သူ့ရဲ့ ရာထူးကို ရင်းပြီး ယူနိုက်တက် ကို ထိုးကျွေးမှာ မဟုတ်တာကြောင့် ဒီပွဲဟာ ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေက ဆိုးရှား အတွက် ပြန်ပြီး ပေးဆပ်တဲ့ ပွဲလို့ပဲ မှတ်ယူ ရတော့မှာပါ ။
ဒီပုံစံ အတိုင်းဆိုရင်တော့ ဆိုးရှား တို့ ရာထူးမြဲ နေဦးမှာ အသေအချာပါပဲ ။
မနေ့ညက ပွဲမှာ ယူနိုက်တက် တို့ ကစားပုံ ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တဖက်က စပါး တို့ အတော်ညံ့ခဲ့တာ ကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး ။
အခုချိန်ထိ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားပုံက လျှင်မြန် သွက်လက်မှု အားနည်းနေဆဲ ဖြစ်ပြီး အီတလီ ကလပ် တခုရဲ့ ကစားပုံမျိုး ဖြစ်နေဆဲပါ ။
ယူနိုက်တက် ကောင်းလွန်းတယ် ဆိုတာထက် အမှားနည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး စပါးတို့ ညံ့ဖျင်းလွန်းတာကြောင့်သာ အခုလို ဂိုးပြတ် ရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ ။
စပါး နေရာမှာသာ လျှင်မြန်တဲ့ ဘရိုက်တန် ၊ ဗီလာ ၊ လက်စတာ တို့ဆိုရင် ယူနိုက်တက် တို့ ဒါမျိုးရလဒ် ရဖို့ မလွယ်သေးပါဘူး ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား ကို အသက်ရှူ ချောင်စေခဲ့တဲ့ စနေညက ပွဲမှာ ဘာတွေ ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ လေ့လာ ကြည့်လိုက် ကြရအောင် . . .
၁ ။ အသက်ကယ်ဆေး ၃-၄-၁-၂
အသင်းကြီးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတိုင်း ဆိုးရှား ထုတ်သုံး နေကျ ပင်တိုင် ကစားကွက်က နောက်တန်း ၅ ယောက်နဲ့ ကစားတာ ပါပဲ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုန်းက Top Six အသင်းတွေနဲ့ တွေ့တိုင်းလိုလို ဆိုးရှား ဒီလိုပဲ ကစားခဲ့တာပါ ။
ဒီကစားကွက် ကို လီဗာပူး နဲ့ ပွဲမှာ မသုံးခဲ့လို့ ၅ ဂိုးထိ ပေးခဲ့ရတာလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ် ။
၃-၄-၁-၂ အတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်က ပြိုင်ဘက်က ကိုယ့်ကိုယ် တိုက်စစ်ဆင် ကစားဖို့ပါ ။ ဒါမှ တန်ပြန် တိုက်စစ် ကနေ အခွင့်အရေးတွေ ရပြီး ဂိုးသွင်းခွင့်တွေ ရှိလာမှာပါ ။ ဒီနေ့ ပွဲက ဒုတိယဂိုး ဟာ ဆိုးရှား ရဲ့ ဖော်မြူလာကွက် အတိုင်း ရသွားခဲ့တာ အားလုံး အမြင်ပါပဲ ။
လာမယ့် ကြားရက်မှာ ယူနိုက်တက် တို့ အတ္တလန်တာ နဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲကို ကစားရပါမယ် ၊ ဒါပြီးရင် မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် မန်စီးတီး နဲ့ပါ ။
၂ သင်းစလုံးက တိုက်စစ်အားသန်ပြီး တိုက်စစ်ပဲ ကစားကြမယ့် အသင်းတွေပါ ။
ဒီပွဲတွေမှာရော နောက်တန်း ၅ ယောက် ကစားကွက်က ဆိုးရှား ကို ထပ်ပြီး ကယ်တင်နိုင်ဦးမလား . . .
၂ ။ ကာဗာ – ဒို
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရိုနယ်ဒို အတွက် အဖော်ကောင်းကို ဆိုးရှား ရှာပေးနိုင်ခဲ့ ပါပြီ ။
အဲ့ဒိလူကတော့ ၃၄ နှစ်သားကြီး အီဒီဆင် ကာဗာနီ ပါပဲ ။
ရက်ဖိုဒ့် ၊ ဆန်ချို တို့နဲ့ မတူတာက ကာဗာနီ ဟာ ရိုနယ်ဒို ကို ကြည့်ပြီး ကစားနိုင်တာ ပါ ။ ရိုနယ်ဒို အထဲ ဝင်လာရင် ကာဗာနီ က ဧရိယာ အစွန်ကို ထွက်ပေးတယ် ။ ရိုနယ်ဒို အစွန်ကို ရောက်နေရင် ကာဗာနီ က အထောင် တိုက်စစ်မှူး နေရာကို ဝင်ကစား ပေးပါတယ် ။
ဒါက ရိုနယ်ဒို ကို တချိန်တည်းမှာ တောင်ပံကစားသမားရော အထောင်တိုက်စစ်မှူး နေရာကိုပါ ကစားရစေတဲ့ ဝန်ကို လျော့သွားစေပြီး ပိုမို လွတ်လွတ် လပ်လပ် ကစားခွင့် ရစေခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒါရဲ့ အကျိုးဆက် ကတော့ ရိုနယ်ဒို ဆီက သွင်းဂိုး နဲ့ ဖန်တီးမှု ၁ ကြိမ်စီ ထွက်လာခဲ့တာပါ ။
ဒါပေမယ့် ၂ ယောက်စလုံးက အတော် အသက်ကြီးနေပါပြီ ၊ တရာသီလုံး ပွဲတိုင်းတွဲ ကစားလို့ မရသလို လျှင်မြန် မာကျောတဲ့ ခံစစ်နဲ့ ဆိုရင်လည်း ပြဿနာ ရှိနိုင်ပါတယ် ။
လောလောဆယ်တော့ ကာဗာ-ဒို အတွဲက ဆိုးရှား ကို ၃ မှတ်ယူပေးခဲ့ပါပြီ ။
၃ ။ Attacking Bissaka
အင်္ဂလန် မှာ ညာနောက်ခံလူကောင်းတွေ အတော်ပေါ ပါတယ် ။
စပါး နဲ့ အတူ ကိုင်လ်ပေါ်ကာ ၊ ထရစ်ပီယာ တို့ ထွန်းတောက်ပြီး အသင်းကြီးတွေဆီ ကိုယ်စီ ပြောင်းခဲ့ကြသလို ထရန့် အလက်ဇန်းဒါး အာနိုး ဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာ့ အဆင့် ညာနောက်ခံလူ အဖြစ် လှမ်းတက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီရာသီ မှာလည်း ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ညာနောက်ခံလူ ရစ်ဆီ ဂျိမ်းစ် အထူးခြေစွမ်းပြနေပြီး နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲမှာ ချဲလ်ဆီး အတွက် အရေးပါတဲ့ အဖွင့် ၂ ဂိုးကို သွင်းပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလို တိုက်စစ်အားသန် ညာနောက်ခံလူ အင်္ဂလန်သားတွေ ရှိနေပေမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ညာနောက်ခံလူ အင်္ဂလန်သား ဘစ်ဆာကာ ကတော့ ခံစစ်ကိုသာ အဓိက အားသန်သူ အဖြစ် ရှိနေခဲ့တာကို အားလုံး သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ ။
မနေ့ညက ပွဲမှာတော့ ထူးဆန်းမှု တခုကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဘစ်ဆာကာ ဟာ ညာတောင်ပံ တလျောက် တိုက်စစ်ကို အကြိမ်များစွာ လိုက်ပါ ခဲ့ပြီး ဖြတ်တင်ဘောများစွာ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ရုံသာမက မြင်ရခဲတဲ့ လိမ်ခေါက် ကျော်ဖြတ်မှုတွေ ကိုပါ ပြုလုပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ မနေ့က ဘစ်ဆာကာ ရဲ့ ကစားပုံဟာ ရလဒ်ထက်တောင် ပိုပြီး အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းခဲ့ မှာပါ ။
၄ ။ စပါး နဲ့ ဟယ်ရီကိန်း ပြဿနာ
မနေ့က ညမတိုင်ခင် အထိ ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား ဟာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ အညံ့ဆုံး ကစားသမားလို့ ထင်မိခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် စပါး နဲ့ ရင်ဆိုင် အတွေ့မှာတော့ ဟယ်ရီကိန်း က ပိုညံ့တဲ့ အင်္ဂလိပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြသသွားခဲ့ ပါပြီ ။
စပါး ရဲ့ ဒီရှုံးပွဲ မှာ နည်းပြ နူနို က အဓိက ကျခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ကွင်းထဲက ကစားသမားတွေ ၊ အထူးသဖြင့် ဟယ်ရီကိန်း ရဲ့ အရည်အသွေး ကလည်း အရေးပါခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ။
နူနို ရဲ့ အဓိက အမှားကတော့ ကွင်းလယ် ခံစစ်သမား ၂ ယောက်ကို တပြိုင်တည်း ထည့်ခဲ့တာကြောင့် တိုက်စစ် အားပျော့ သွားပြီး တောင်ပံ တွေကနေသာ အဓိက ထိုးဖောက်ခဲ့ရတာပါပဲ ။ ကိန်း ကလည်း ယူနိုက်တက် ခံစစ်မှူး ၃ ယောက်ကြားမှာ မလှုပ်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ ဆွန်ဟောင်မင် တယောက်သာ အဓိက အန္တရာယ် ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကို နူနို အမြန် မပြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
ကိန်း ကတော့ မန်စီးတီး မပြောင်းရလို့လား ၊ စာချုပ်သစ် မချုပ်ရလို့လား ဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး ။ တော်တော်လေး ကို ခြေစွမ်းကျ သွားပါပြီ ။ ကွင်းထဲမှာ လိုက်ကစား ပေမယ့် အဓိက တာဝန်ဖြစ်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ကဏ္ဍ ကိုတော့ တော်တော်လေး မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာ ကို မြင်တွေ့ နေရပါတယ် ။
ဒီပုံစံ အတိုင်းဆိုရင်တော့ ကိန်း တယောက် ဇန်နဝါရီမှာ စပါး ကနေ ထွက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
Previous Article စနေညရဲ့ မတည်မြဲခြင်းများ ၊ အမောဖောက်တဲ့ အဂွေရို ၊ ငှက်ကြားနဲ့ သတင်းထွက်လာတဲ့ အီတလီနည်းပြတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article လီဗာပူးနဲ့ မန်စီးတီးတို့ အမှတ်လျော့ခဲ့ခြင်း အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ တူချယ်